Fitadiavana – Miitatra amin’ny sehatra hafa ireo asa any ivelany - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fitadiavana – Miitatra amin’ny sehatra hafa ireo asa any ivelany
Ireo vehivavy no tena liana amin'ny fitadiavana asa any ivelany
Varoboba. Mpiasa an’arivony no mbola tadiavin’ ireo birao mpandefa mpiasa any ivelany. Efa tsy miafina ary tsy mijanona amin’ny alalan’ny peta-drindrina intsony ny fitadiavana mpiasa malagasy hiasa amin’ireo firenena arabo. Miparitaka amin’ny fahitalavitra amin’izao fotoana ny dokam-barotra izay hitadiavana mpiasa ho atsy Koweit sy Arabia Saodita.
Misy ny asa rehetra na ho an’ny lehilahy na ho an’ny vehivavy, hono, any amin’ireo firenena ireo. “Ny asa rehetra momba ny trano no ataon’ny lehilahy. Manomboka amin’ny fananganana ny trano izany ka hatramin’ny fandokoana sy ny herinaratra. Mpanampy an-trano, mpampivelona, mpanao mofo, mpanao volo, … kosa ny an’ny vehivavy”, araka ny nambaran’ny birao New Hope, etsy Isoraka. Ny ao Koweit kosa indray dia mbola momba ireo mpiasa an-trano ihany araka ny nambaran’ny Fa entreprise. Manodidina ny Ar 540 000 kosa ny karama ho an’ireo asa ireo.
Birao mpandefa mpiasa miisa 10 no voalaza fa efa nomen’ny minisiteran’ny Asam-panjakana fahazoan-dalana hanao ity asa fandefasana mpiasa ity. “Tsy maintsy jerena izay tena ara-dalàna sy ny fifanarahana atao amin’ilay firenena mba hisorohana ny loza toy ny tany Liban. 65%-n’ny tanora malagasy mantsy no manana fahasahiranana amin’ny fitadiavana asa”, hoy ny minisitra, Randriamanantsoa Tabera.
Mpanoratra Rijakely, 07.08.2012, 08:56	FIARAHAMONINA